Na-agbaga n'ugwu ndị Scotland
Họrọ otu nhọrọ ịbanye
Chefu aha njirimara gị?
Biko chere, abanye na ...
Obodo ime obodo
Ọ dịghị Christmas
Maka ire ma ọ bụ ụlọ
Tinye Dezie Ndepụta
Tinye Ndepụta Ezumike
Tinye Ndepụta Njem
Tinye ihe onwunwe maka ere
Nyefee Ụzọ ma ọ bụ Ụzọ
Ụzọ ọkwọ ụgbọala
Ụzọ na-agba agba
Ụzọ egwu egwu
Ụzọ egwu Munros
Ugwu egwu igwe
Ntugharị na-eje ije
Onye ọ bụla ị bụ, ihe ọbụla ị na-achọ, ya niile amalite ebe a.
Ọnọdụ	 Drumnadrochit Inverness
Ụlọ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ndị okenye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ogo site na ahịa	 <GBP49.00	GBP50.00 - GBP99.00	GBP100.00 - GBP149.00	GBP150.00 - GBP199.00	> GBP200.00
Nduzi na-eduzi na ugwu ugwu ndị Scotland
E dere na 14 November 2014 . Edere ya Ihe
Tweet tụgide ya
Na-agba ọsọ na ugwuEnwere ọtụtụ klọb ịgba ígwè na mpaghara ọtụtụ ndị na-agba agba na Scotland na ndị fọdụrụ na UK. CTC bụ otu ahụ nke na-ejikarị ụdị ọrụ dị iche iche eme ihe.
Atụmatụ maka ịgba n'okporo ụzọ na-agba ịnyịnya n'enweghị ihe ọ bụla. Soro Ụzọ Awara Awara - emela ka ọkụ na-acha uhie uhie ma ghara ịdọrọ n'elu pavement ma ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ a họọrọ; Na igwe mmiri na-ele anya ọsọ gị dị ka ala nwere ike ịmị amị na ọ ga-ewe gị ogologo oge ịkwụsị; Ride n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ ziri ezi na nke doro anya nke nkwụsị; Chee echiche banyere okpu agha; Mee ka okporo ụzọ gị kwụ ọtọ.
Jide n'aka na ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịhụ gị Ride na ọnọdụ ebe ị nwere ike ịhụ ma hụ; Jiri ncha ma tụlee uwe na-egbuke egbuke ma ọ bụ nke na-egbukepụ egbukepụ, karịsịa na obodo, n'abalị na n'oge ọjọọ; Mee ka ndị ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka ụzọ hụ anya, karịsịa na nhazi, mgbe ahụ ị maara na ha ahụwo gị; Ihe ịrịba ama mgbe niile; Jiri mgbịrịgba gị - ọ bụghị ndị niile na-agagharị agagharị nwere ike ịhụ na ị maara ụgbọala. Ọtụtụ ngwakọta ga-eme mgbe onye na-agba ígwè nọ n'ime ụgbọala nke na-atụgharị n'aka ekpe. Echela na ụgbọala ahụ na-aga n'ihu n'ihu naanị n'ihi na ọ naghị egosi aka ekpe. Na - ezere 'ịnya' ụgbọala ọ bụla n'ọnọdụ a - ọ ka mma ịkwado azụ ruo mgbe ụgbọala ahụ kwụsịrị. Atụmatụ maka ndị ọkwọ ụgbọala Iji mee ka okporo ụzọ dị mma dịka ha nwere ike ịdị, ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ịma ndị na-agba ígwè: Mgbe ị na-echegharị nche maka nche maka ndị na-agba ígwè na-abịa n'elu nso gị ma egbula ha; Nye ndị ọgba chaa chaa ma ọ bụrụ na ị gafee;
N'abalị, tinye ọkụ ọkụ gị mgbe ị na-abịakwute ndị cyclist; N'igwe ihu igwe, kwe ka ndị na-agba ígwè tinyekwuo ebe dịka ala nwere ike ịmị amị. Cheta, ndị na-agba ígwè na ndị ọkwọ ụgbọala na-enwerịrị ikike iji ma kesaa otu uzo okporo ụzọ. Ịkwanyere ndị ọrụ ọhụụ niile aka na-enyere onye ọ bụla aka irite uru site na njem site n'okporo ụzọ. Maka ozi ndị ọzọ na-aga - https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code A BỤ EZI AMATA
Callander na-anọ n'akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ nke Loch Lomond na Trossachs National Park na ọ bụ ebe dị mma maka Scotland's Lochs & Glens Chọta ebe dị elu nke ugwu Scotland nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ na West Highland Way. Ugwu ndị na-agba ọsọ, ndị na-asọ oyi na mmiri na-asọ asọ iji kwụghachi gị ụgwọ site na Milngavie (Glasgow) ruo Fort William, na-enye Bed na nri ụtụtụ n'okporo ụzọ, chọpụta ebe dị mma, , nnukwu ụlọ ahịa a na-eme njem nlegharị anya dị elu site na Fort William na Inverness, na-eme njem site na ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị egwu n'ehihie ma na-atụle nnukwu ụlọ ọbịa na abalị, na Rannoch Moor, Kinlochleven site na "Devil's Staircase, Ben Nevis na Fort William, Isi Obodo nke Scotland dị n'isi Loch Linnhe.
Ogwu site na odidi nke oghere na oghere nke mejupụtara Loch Lomond & Trossachs National Park na Highland Perthshire. Chọpụta Scotland ka ị na-agafe na Cairngorms National Park. Obodo ukwu dị elu, ụlọ akụkọ akụkọ ihe mere eme, mkparịta ụka Speyside malt, ogige agha ndị Jekọb, maka mgbatị dị egwu ma na-atọ ụtọ iji mee ihe ngosi nke ime obodo dị gburugburu Loch Ness, were otu igwe kwụ otu ebe.
Ógbè Loch Ness na-enye ebe dịgasị iche iche site na eriri nwayọọ-ụzọ nke Canal Caledonian iji mee ihe mgbagwoju anya, ụzọ dị anya, ụzọ-ụzọ dịka nnukwu Glen Way. Ụzọ ndị dị jụụ nke Strathnairn na n'akụkụ ndịda nke loch dị mma maka ndị na-agba ígwè nakwa na ọtụtụ nnukwu ugwu na-agba ịnyịnya. Ebe a na-agba Strathglass na-enye ọmarịcha ahụmahụ nke ịgba ịnyịnya ígwè ka ọ bụrụ onye mmegide ọ bụla ná mba ahụ. Ebe ozo di site na Beauly na Loch Ness, na-enye otutu uzo ohia di iche iche n'uzo, na-achikota n'ime nani Glens nke Affric, Cannich na Strathfarrer. Ebe ugwu Glen Cannich dị elu karịa obodo dị na Cannich, na obere oge, mana ịrị elu dị elu na-enye ohere ịnweta okporo ụzọ ọhịa, nke ya na ụfọdụ ịnya ụgbọ okporo ígwè Mullardoch, ga-akpọrọ gị gaa Loch Mullardoch, 9 kilomita dị anya.
Nke a bụ ihe dị egwu, ebe ugwu dị elu gbara ya gburugburu. Ịrịgo site na Glen Cannich bụ n'ezie steepụ ma ụzọ dịtụ jụụ ma nloghachi, nkwụsị niile! Glen Affric, nwere ike ịbịaru nso site na ụzọ okporo ọhịa ndị dị na Cannich na Tomich, kwụsị n'akụkụ osimiri Loch Beinn nke bụ 'Mheadhoin, nke nwere mmiri mmiri. Ugwu dị ala n'ebe ndịda nke Tomich na Cannich, na Corrimony ma ọ bụ ọbụna ruo Glenmoriston, bụ egwu dịpụrụ adịpụ site na ya nile, ọ bụ ụzọ egwu wilderness. Ụzọ egwu si Dog Falls ruo Knockfin dị oke mma, ka ị na-aga Tomich, ma ọ bụ nke ọzọ site na Loch Affric na Tomich site na mpaghara West Guisachan, Cougie na Plodda Falls. N'ịga n'ihu site na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu n'elu ugwu ndịda nke Tomich na Cannich, na Corrimony ma ọ bụ ọbụna ruo Glenmoriston, Ebe kachasị mma ịnọ ebe a na-ehi ụra na ezumike bụ Ụlọ njem na steading na-aga n'okporo ụzọ n'okporo ámá na nchekwa okpukpu isii, mmalite nke strathglass na ndị ọzọ glens na mpaghara a, dị mma ma na-eri nri abalị nri na mpaghara, na biya na mgbidi iji mechaa mgbede tupu ụra, Na ụtụtụ ezigbo nri iri atọ na ụtụtụ nri ụtụtụ ka ị na-aga ụbọchị niile The Steading Highland Glen Nọrọ
Chọpụta ugwu, ebe a na-agbapụ na Isle nke Skye ka ị na-aga ogologo oge na agbari nke àgwàetiti a na-adọrọ adọrọ jupụtara n'ụsọ anụ ọhịa na agwaetiti ndị na-ezoro ezo ndị dị jụụ, ebe ndị na-adịghị mma ị ga-enwe ike iji oge dị mma. Islama na Jura nke dị n'ụsọ oké osimiri dị egwu bụ nke mara mma bụ ebe dị iche iche na-agagharị gburugburu, na-enyekwa ihe ọhụụ ọhụrụ maka ime ka àgwàetiti ahụ dị. Okporo ụzọ ndị gbara agwaetiti gburugburu na-agbahapụ na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu, ọ dịghị mgbe echefu echefu. Utu ndi mmadu na-adi n'ime ya kacha mma na ebe ndi ozo mara mma na ndi ozo nke na-eburu gi gaa ebe ohuru, na-enye Bed na nri ụtụtụ maka onye njem ahụ ike gwụrụ iji nọrọ n'abalị ahụ.
Nke a bụ whiskey ndị hụrụ nrọ emezu, na asatọ distilleries na agwaetiti na ọtụtụ kemgwucha ụtọ pubs na Bed na nri ụtụtụ kwa! Obodo niile dị n'àgwàetiti niile na-acha ọcha ọcha ma nsị na-adọrọ mmasị karịsịa mgbe ogologo ogologo ụbọchị, Ịga njem nke dị n'ebe ugwu nke Scotland pụtara ịchọta ihe n'ụsọ oké osimiri nke dị nnọọ ịtụnanya.
Ịgba gburugburu na Dunnet Head na-eme ka ị gafere ebe dị egwu na oke mmiri nke na-etu ọnụ ala ndị dị ebube na echiche nke àgwàetiti ndị na-esighi abụọ, E nwere ụfọdụ ebe ọdịnala mara mma ịnọ na nhọrọ nke obere, ezinụlọ na-agba Bed & Breakfast, gọọmenti rụrụ dị ka hotels ndị nwere ụfọdụ amara banyere ha. Ị ga-enweta obi ụtọ na ebe ọ bụla ị nọ na Scotland ma ị ga-achọpụtakwa na ọtụtụ ebe na-enye nchekwa nchekwa maka igwekịkị gị.
Dee nyochaa mbu!
Dee nyochaa gị
Aha aha *
Onye edemede email *
Isi okwu *
Nchịkọta Nchịkọta *
More ka ịkekọrịta? (Nhọrọ)
Tinye foto ma ọ bụ faịlụ
Ị bụghị robot
Ala ugwu Scotland nke ugwu 7 Day Forecast
Nduzi ndi nleta ugwu
Họrọ Mpaghara AberdeenshireAngusArgyllBanffshireCaithnessInvernessKincardineshireMorayNairnshireOrkneyOuter HebridesPerthshireRoss & CromartyShetlandSutherland
Ozizi Nduzi nke William Fort William
National Museum of Scotland (Edinburgh) Nduzi
Ntuziaka Nduzi nke Aberdeenshire
Akwụkwọ Wick Heritage Center Nduzi Nduzi
Nduzi nke Ije ije na Ugwu oke ugwu Scotland
Ebe obibi Glencoe skiing
Glen Urquhart Onye Ntuziaka Ọhụụ
ngosi # 5 10 15 20 25 30 50 100 All
Debanye na akwụkwọ akụkọ anyị na ihe ndị ọzọ
Denye aha na RSS Feed
Kpọsaa Ezumike Ezumike
Kpọsaa Ahịa Maka Sale
Kpọsaa njem nleta na Scottish Highlands
eluland4you © 2016-2018. Ikike niile echekwabara
Kuki mere ka ọ dịkwuo mfe inye gị ọrụ anyị. Site n'iji ọrụ anyị mee ka anyị jiri kuki.